यसकारण विहेपछि महिला मोटाउँने र पुरुष दुब्लाउने हुन्छ – Jagaran Nepal
यसकारण विहेपछि महिला मोटाउँने र पुरुष दुब्लाउने हुन्छ
काठमाडौं – तपाई हामीले देखेको तथा भोगेको कुरा हो विवाहपछि महिलाको शरीरमा धेरै परिवर्तन आउँछ । पारिवारिक व्यस्तताका कारण उनीहरुलाई आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिन सक्दैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको शरीरमा परिवर्तन आउँछन् । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ ।
तपाइले बिबाह गनए लागेको स्लिम स्त्री बिबाह पछी स्लिम नै रहन्छ भन्ने हुदैन । कुनेपनि स्त्रीको बिबाह पछि शरिर मोटो र भद्दा हुदै जान्छ । यसबारे अमेरीकामा एक अनुसन्धान गरिएको थियो । उक्त अनुसन्धानमा विहेपछि महिलाहरु मोटाउने र सम्बन्ध विच्छेदप्रति पुरुषहरु मोटाउने तथ्य पत्ता लागेको छ । विहेपछि महिलाहरुले पतिको परिवारको बढि सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खासमा महिलाहरु बिहेपछी ढि आत्मविश्वासी बन्ने र आफ्नो जिउडाल र सुन्दरताको मामिलालाई कम मात्र महत्व दिने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा महिलाहरु बिहेपछी मोटो हुदै जान्छन् । ओहायो विश्वविद्यालयमा गरिएको उक्त अनुसंधानमा पुरुषहरु भने विहेपछि दुब्लाउने र डि-भोर्सपछि मोटाउने गरेको पाइएको छ । रुषहरुले बिबाहपछी मानसिक मात्र होइन शा’रीरिक रुपमै बढि उर्जा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बिहेपछी पुरुषहरु महिलाको भर गर्ने हुन्छन् भने डि’भोर्स पछि एक्लो हुदा मोटाउछन् ।
साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । उनीहरुको शरीर एकदमै मोटाउने तथा हिप एकदमै बढ्छ । आखिर बिहेपछि किन यस्तो हुन्छ त रु उनीहरुको नि’तम्ब किन फुल्छ ? एक सर्वेले के कुराले महिलाको शारीरिक स्वरूपमा परिवर्तन आउँछ ? यसको खोजी गरेको छ ।
युनिभर्सिटी अफ लिड्सका सोधकर्ताले गरेको अध्ययन अनुसार महिलाको हि’पमा आउने परिवर्तनको कारण खोजिएको छ । यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो ।
यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटीहरुले एकदिनमै पटक पटक यौ ‘न स’म्ब’न्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा ठूलो थियो ।
यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनी \_हरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठूलो छ उनिहरुलाई ग’र्भवती हुँदा खासै समस्या नहुने बताइएको थियो ।
बिहेपछि महिलाहरु धेरै मोटाउनुको कारण पनि पत्ता लागेको छ । विभिन्न अध्यययनले विवाहपछि महिलाहरु मोटाउनुको कारण पत्ता लागेको हने ।
२. हर्मोनको परिवर्तन:
४. सामाजिक द’बाब कम हुनुः